Muuska Dusha Sare Ka Madoobaada Ma Ahan Qudhun Ee Waa Dawo - Daryeel Magazine
Muuska Dusha Sare Ka Madoobaada Ma Ahan Qudhun Ee Waa Dawo
Midhaha Muuska waxaa ku jira maadooyinka cuntada laga helo dhamaantood sida faytamiinnada iyo macaanka dabiiciga ah, waxayna dhakhaatiirtu sheegaan in dawo looga raadin karo xanuuno badan, wuxuu faaiidooyin wayn u leeyahay xubnaha jidhkeenna.
Inta badan dadka muuska cuna waxay ka siman yihiin fahamka ah in madowga ku samaysma qolofta kore ee muuska uu muujinayo qudhmid iyo inuu xumaaday oo aan la cuni karin sidaasna ay iskaga tuuraan, laakiin xaqiiqada cilmiga ah waxay tahay in fahamkaasi khaldan yahay. Markasta oo muuska diirkiisu sii madoobaado waa markasta oo bisaylkiisu gaadho halkii loo baahnaa.
Marka kasta oo muusku uu sii bislaado waxaa ku badanaysa maadada loo yaqaan TNF (Tumor Necrosis Factor) oo ah maado ka hortagta cudurka kansarka. Maadani waxay burburisaa unugyada burooyinka keena kansarka.
Cunista Muusku waxay hoos u dhigtaa xanuunka dhiig karka
Akhriso: Siyaabaha dabiiciga ah ee looga takhalusi karo dhiig karka
Halkaan hoose ka daawo Hussein Kurdi oo sharaxaya faaidada muusku leeyahay
Waxtarka Sisinta (WAA DAWO QIIMO BADAN) Malabka Iyo Qorfaha Oo La Isku Daraa Waa Dawo Dabiici Ah Oo Lagula Tacaali Karo Xanuuno Badan Sinjibiisha: Khasnad Caafiimaad Oo La Moogyahay (WAA DAWO WAXTAR BADAN) Faaidooyinka Dahabiga Ah Ee Muuska Cagaaran